Rojava। Rojava संघर्ष
Rojava Shammai को उत्तर-पश्चिम (सिरिया स्थानीय नाम) मा स्थित छ र एक विशाल क्षेत्र ओगटेको छ। पछिल्लो केही वर्ष मा, क्षेत्र अक्सर किनभने सिरियाली गृहयुद्ध को रूपरेखा मा लडाई सञ्चालनका विश्व समाचार को ध्यान छ। मिति, Kurdistan को को छ हट स्पट ग्रह मा। तर, यो दृश्य को एक पर्यटक बिन्दुबाट धेरै रोचक ठाँउ हो। यहाँ एक धेरै प्राचीन स्मारक र कुर्दिस मान्छे को शताब्दीयौंदेखि पुरानो संस्कृति देख्न सक्छौं।
क्षेत्र को विवरण
Rojava - यो बरु सिरिया को आत्म-उत्तरी क्षेत्रहरु छ। संविधान अन्तर्गत क्षेत्र सिरियाको अरब गणतन्त्र को भाग हो। तर लगभग4वर्ष लागि इलाका डे facto स्थानीय संगठनहरूले नियन्त्रण। सिरियाली कुर्दिस enclave तथाकथित महान् Kurdistan मात्र भाग हो। त्यो कुर्द बाँच्न जहाँ क्षेत्रमा छ। सिरिया, टर्की, इराक: Kurdistan इलाका3अमेरिका को भाग हो। र तिनीहरूलाई एक कुनै स्वतन्त्रता छ। तर, कुर्द राष्ट्रिय राज्य सिर्जना लागि एकदम लामो संघर्ष हो। को कुर्द - लगभग5लाख मान्छे, जो को विशाल बहुमत को सिरियाली कुर्दिस जनसंख्या को क्षेत्र मा। प्रयोग Rozhava वा पश्चिमी Kurdistan आत्म-क्षेत्र रूपमा (किनकी यो अन्य कुर्दिस जनसंख्या संग क्षेत्रहरु को सम्बन्ध मा पश्चिम मा स्थित छ)।
प्रमुख भाषाहरू - अरबी र Kurmanji। जो पनि आधारभूत आय ल्याउँछ कृषि विकास। केही क्षेत्रमा तेल उत्पादन। युद्ध सुरु गरे पछि, वित्त अधिकांश रक्षा र हतियार मा खर्च भएको छ। तसर्थ, अधिकारीहरु कर सबै निजी र कानुनी व्यक्ति मुक्त गर्ने निर्णय गरे। यो सानो कारोबार को विकास र धेरै सानो सहकारी सिर्जना उत्साहित छ। तथापि, राज्य मूल्यहरु विनियमित र monopolies को सम्भव उपस्थिति सामना गर्न जिम्मेवारी छ।
Kurdistan मा धर्म छिमेकी अरब राज्य अमेरिका मा भन्दा एक कम महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। शक्ति मा Rozhave पूर्ण धर्मनिरपेक्ष छ। 20 औं शताब्दीमा फिर्ता, एन सामूहिक को कुर्द साम्यवाद र मार्क्सवाद-Leninism सहित विभिन्न बायाँ-भाग विचारै, विभाजन गर्न थाले। लडाई कट्टरपंथी समूह पहिले नै युद्ध अघि अस्तित्व। हाल द्वन्द्व पनि जोडले नागरिक राष्ट्रवाद र एकल जाति-राज्य सबै कुर्दिस क्षेत्रहरूमा एकजुट गर्न इच्छा को लहर उठायो। कुर्द यस्तो छैन कि संसारमा दोस्रो राष्ट्र हो।
सिरिया मा गृहयुद्ध को शुरुवात
Rojava द्वन्द्व देश भर अशान्ति संग साथ थाले। मध्य-2011 मा विरोधी-सरकार विरोध सिरिया मार्फत raged। को कुर्द पनि तिनीहरूलाई समर्थन गरेका छन्। तर, आवश्यकताहरु फरक। सबै को पहिलो, त्यहाँ स्वतन्त्रता वा क्षेत्रको पनि स्वतन्त्रता लागि कल थिए। यो सिरियाको विरोधको एक सहयोग थियो। तर, 2012 द्वारा स्थिति बिग्रन छ। प्रहरी अधिकारीहरु विरोधीको साथ निम्न संघर्ष आक्रमण एक श्रृंखला मंचन। गोदामों हतियार looted थिए। यो समय तिर, देश मा राजनीतिक घटनाहरू कट्टरपंथी इस्लामी fundamentalists सामेल भएका छन्। लड proasadovskih paramilitaristskih formations को समर्थन संग गठन सिरियाली फ्री सेना र सरकारी सेना बीच बाहिर भङ्ग।
Islamism संग सिरियाली Kurdistan मा युद्ध
किनभने कुर्द बीच कट्टरपंथी Islamism कहिल्यै लोकप्रिय, Rojava लामो तटस्थ रह्यो। तर, स्थानीय समूह शक्ति जफत र क्षेत्रमा शक्ति छ जो सर्वोच्च परिषद, स्थापित गरेको छ। यस मामला मा, कुर्द तिनीहरूले सिरिया भाग, Bashar अल-Assad धेरै क्षेत्रमा सहयोग गर्न अस्वीकार छैन। Kurdistan केही क्षेत्रमा सिरियाली सरकारको नियन्त्रणमा रहने जारी। सिरियाली राष्ट्रिय परिषद Rozhavy को स्वतन्त्रता पहिचान छैन, तर कार्य को लागि कल छैन। सरकार बारम्बार यो सम्झौता र सिरियाली संविधान को रूपरेखा भित्र कुर्द व्यापक स्वतन्त्रता दिन तयार छ कि यसो भएको छ।
2013 मा, सिरिया समूह बढ्यो छ "को इस्लामी राज्य इराक र Levant"। सबै दुनिया मिडिया Mosul मा एक सफल आक्रमण आतंकवादियहरुको पछि LIH रिपोर्ट। रेकर्ड समय र हतियार र लडाकूको कर्मियों को एक सानो राशि संग जफत र देश मा सबै भन्दा ठूलो शहर को एक पकड गर्न सक्षम थिए। त्यो समय देखि म सक्रिय LIH विस्तार गर्न थाले। Islamists नियन्त्रणमा इराक र सिरियाको ठूलो क्षेत्रमा थिए। एक समय पछि उनि देश को उत्तरी क्षेत्रहरु आए।
को Islamists सक्रियतासाथ मिलिशिया सामेल गर्न थाले देखि स्थानीय जनसंख्या सुरक्षा गर्न। Rojava द्वन्द्व पूर्ण लेट 2013 मा erupted। यो बिन्दुमा, LIH पूर्ण बन्द सिरियाको उत्तरी क्षेत्रहरु बाँकी काट्न। Kurdistan को पश्चिमी भाग मात्र होइन आतंककारीहरूले बाँकी देखि काटियो, तर पनि निःशुल्क सिरियाली सेना (एफएसए)। LIH आतंकवादियहरुको शहर को Kőbánya क्षेत्रमा कुर्दिस क्षेत्र मा एउटा सक्रिय आक्रमण गर्न थाले। छोटो समयमा तिनीहरूले अन्य ठाउँमा धेरै किलोमिटर लागि अगाडि लाइन धक्का गर्न सक्षम थिए।
को Kurdistan Peshmerga सेना को मुख्य सैन्य शक्ति हो। तिनीहरूले 100 वर्ष पहिले स्थापित र आदिवासी मिलिशिया छन् थियो। मिति, विभिन्न स्रोतबाट अनुसार, यी एकाइहरूको संख्या 150-200 हजार अनुमान गरिएको छ। तिनीहरूले संग लडिरहेका छन् को आतंकवादियहरुको "इस्लामी राज्य" सिरिया र इराक मा। Rozhava इराक बाट गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक सहायताको हुन्छ।
सिरियाली कुर्दिस समूह को क्षेत्र मा अनिवार्य सिरिया को लोकतान्त्रिक पार्टी को संग्रामशील भाग हो जो राष्ट्रिय राष्ट्रिय मिलिशिया, सञ्चालन। यी एकाइहरूको आफ्नो सबैभन्दा सैनिकहरु मा बायाँ-भाग विचारधारा पकड। स्वयंसेवकहरु को ठूलो प्रवाह कुर्द द्वारा Inhabited छ जो टर्की, आउँछ। त्यहाँ smuggled गरिएको छ Kurdistan मजदुर 'पार्टी (PKK)। साथै, स्थानीय जनसंख्या सैनिकहरु र नागरिकहरु को लड प्रभावित गर्न नियमित सहयोग संकलन।
Islamism संग युद्ध
आतंकवादियहरुको LIH को कुर्द तिर विशेष क्रूर व्यवहार। मिडिया मा आदिवासी जनसंख्या को नरसंहार प्रमाण दसौं लीक। यस कारण, र मासिक Kurdistan PKK सम्बन्ध गर्न स्वयंसेवकहरु सयौं धन्यवाद आउनुहोस्। मूलतः यो एक बायाँ-भाग मान्छे छ। संगठित धेरै युरोपेली देशहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू LIH लड्न स्वयंसेवकहरु लुकाएर लैजानु। यो मुख्य जर्मनी, स्पेन र इटाली छ। मिडिया नियमित रूसी स्वयंसेवकहरु को आगमन बारे जानकारी सब। हामी पनि फ्रान्सेली को एक समूह पहिले पनि सिरिया आइपुगे पनि Donbass मा separatists, मदत भनेर सिके। लामो कब्जाको र Cobán शहर लागि भीषण लडाई को घेर संग एकता व्यक्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय धक्का छ। सिरियाली Kurdistan मा हप्तादिन कुर्दिस लडाकूको आतंककारीहरूले को नियमित shelling अन्तर्गत छन्।
टर्की विरुद्ध Rojava
टर्की सरकार लामो संघर्ष कुर्द संग छ। टर्की मा नै अझै पनि स्वायत्तता नगर्ने कुर्द को एक विशाल नम्बरमा घर हो। यस कारण brutally टर्की अधिकारीहरु संग दबेको थियो जो विद्रोह, एक फरक समयमा स्थान लियो। PKK नियमित रूपमा शहरी क्षेत्रमा टर्की प्रहरीले एक सुटआउट आयोजित। टर्की बारम्बार संयुक्त राष्ट्र कुर्द आतंककारी insurgent समूह पहिचान गर्न माग गरेको छ। राष्ट्रपति Erdogan आफूलाई उहाँले यसको सीमाना मा एक कुर्दिस राष्ट्र-राज्य स्थापना अनुमति थिएन भन्नुभयो। प्रतिक्रिया मा, कुर्द टर्की को क्षेत्र मा सक्रिय subversive गतिविधिहरु जारी राखियो। को कुर्द विरुद्ध सरकार सेना द्वारा दीर्घ सञ्चालन पहिले नै सय एक भन्दा बढी सैनिक मारिए छ। विद्रोही सक्रिय Rojava समर्थन गरिएको छ। क्षेत्र शान्ति र स्वतन्त्रता हुनेछ, यो अझै पनि अस्पष्ट छ।
क्रममा रूसी राष्ट्रपति सूची। शासनकालमा। रूस र इतिहास शासकहरूले
मा माल्डोवा विरोध: कारणहरू र नतिजा
को extremist - आन्तरिक दिशानिर्देश बिना एक मानिस।
अनातोली मेदभेदेभ: जीवनी, दिमित्री मेदभेदेभ बुबा फोटो
छोराछोरीको खुजली लक्षण
"कमाण्डर" - सोभियत संघ हेर्ने। अवलोकन, वर्णन, इतिहास र रोचक तथ्य
कसरी "Pokemon जाओ" मा सिक्का कमाउन। खेल मा सुन निकासी सबै विधिहरू
किन मूत्र को रंग परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ?
एक उदाहरणीय कथा वयस्कहरूको लागि 'Gingerbread मानिस नयाँ तरिकामा' परिदृश्य
के लागि संरक्षक र अभिभावक को शरीरहरू के हुन्?
विदेशी मुद्रा मा आधारभूत त्रुटिहरू व्यापारीहरु।
कसरी एक कार युग मा एक घोडा आकर्षित गर्न